केही वर्षभित्रै नेपालमा मुटुको प्रत्यारोपण सफल हुन्छ - Karobar National Economic Daily
केही वर्षभित्रै नेपालमा मुटुको प्रत्यारोपण सफल हुन्छ
query_builderSeptember 3, 2017 9:14 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1562
डा. अनिल भट्टराई मुटुरोग विशेषज्ञ
नेपालमा केही वर्ष अघिसम्म सरुवारोग स्वास्थ्यको प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको थियो । पछिल्लो समयमा नेपालमा जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनसँगै बदलिएको खानपान, रहनसहनले नसर्ने रोगले व्यापकता लिँदै आएको छ ।
सरकारको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिले ६० प्रतिशत नसर्ने र ४० प्रतिशत सरुवा रोगका कारण मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । यसरी नसर्ने रोग बढ्दै जानुको मुख्य कारण निष्क्रिय जीवनशैली र खानपान भएको बताउँछन् कार्डियो सर्जन डा. अनिल भट्टराई । विगत १२ वर्षदेखि निरन्तर कार्डियोसर्जनका रूपमा चिकित्सा पेसामा कार्यरत डा. भट्टराई त्रिवि शिक्षण अस्पताल मनमोहन कार्डियोथोरासिस एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका सहप्राध्यापकका रूपमा पनि कार्यरत छन् ।
पूर्णेश्वर मावि, पर्वतबाट विद्यालयस्तरको अध्ययन प्रा गरेका डा. भट्टराईले साराटोभ स्टेट युनिभर्सिटी, रूसबाट सन् २००० मा एमबीबीएस (मास्टर इन कार्डियो भास्कुलर सर्जरी) गरेका हुन् ।
इन्टरनेसनल हर्ट स्कुल इटालीबाट २००९ मा कार्डिक सर्जरीमा एकवर्षे फेलोसिपसमेत गरेका उनले पोदोभा युनिभर्सिटी, इटालीबाटबाट २०१३ मा पिएचडी गरेका हुन् । डा. भट्टराई फ्रन्सिक फोर्टन अवार्डबाट २०११ मा सम्मानितसमेत भएका थिए ।
उक्त अवार्डबाट सम्मानित हुने नेपालका एक मात्र चिकित्सक हुन् भने पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको हातबाट विद्याभूषण ‘क’ अवार्डसमेत पाएका छन् । यिनै चिकित्सक डा. भट्टराईसँग नेपालमा मुटुरोगको अवस्था तथा समग्र चिकित्सा क्षेत्रका अवसर तथा चुनौतीलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी जुनु भट्टराईले गरेको कुराकानीको सार :
पछिल्लो समय नेपालमा नसर्ने रोगको प्रकोप बढ्दै गएको छ, यसमा मुटुरोग प्रमुख देखिएको छ, मुटुरोगको अवस्था के छ ?
नेपालमा मुटुरोगको अवस्था पहिलेभन्दा बढेको छ । समग्र देशको ठोस आँकडा त छैन, तर विभिन्न संघसंस्थाको अध्ययनअनुसार १० प्रतिशतजति मानिसमा कुनै न कुनै किसिमको मुटुरोग भएको पाइन्छ । त्यसमा सबैभन्दा ब
ढी बाथ मुटुरोग देखिएको छ । त्यसपछि दोस्रो स्थानमा जन्मजात मुटुरोग रहेको छ । त्यसपछि मुटुको नली ब्लक हुने, कालान्तरमा गएर त्यसले हृदयाघात निम्त्याउने रोग तेस्रो स्थानमा रहेको छ । त्यसबाहेक पनि मुटुको मांसपेशीका रोगहरू, मुटुको मूल नली फुट्ने जस्ता समस्या पनि उत्तिकै छन् ।
नेपालमा मुटुरोगको अवस्था गाउँ र सहरमा फरक प्रकृतिको छ । सहरी क्षेत्रमा मुटुरोग बढ्नुको मुख्य कारण भनेको खानपान नै हो । बिहान सबेरै उठ्ने, बिना शारीरिक व्यायाम नै काममा निस्कने गर्दा मुटुको समस्या बढ्न जान्छ ।
विभिन्न संघसंस्थाको अध्ययनअनुसार १० प्रतिशतजति मानिसमा कुनै न कुनै किसिमको मुटुरोग भएको पाइन्छ ।
विलासी जीवनको पारखी हुँदा शरीरलाई चाहिने आवश्यक व्यायाम नगर्दा मुटुसम्बन्धी रोग छिटो देखिन्छ । केही मानिसले मर्निङ वाक तथा फिजिकल एक्सरसाइज गर्ने भए पनि अधिकांशले गर्दैनन् । फिजिकल एक्सरसाइज नगरेपछि मुटुको कोरोनरी आर्टिकमा गएर बोसो जम्ने, शरीरमा मोटोपन बढ्ने समस्या देखिन्छ । साथै, सहरमा बसेका अधिकांशले बहुरोजगार गर्ने भएकाले स्ट्रेस धेरै हुन्छ ।
मुटुरोगको अर्को मुख्य कारण भनेको कम सुत्ने र धेरै स्टे«स नै हो । साथै, सहरी क्षेत्रमा धेरै रक्सी तथा चुरोट खाने, चिल्लोमा तारेको धेरै खाने तथा शारीरिक सक्रियता कम गर्ने प्रचलन रहेकाले पनि मुटुको कोरोनरी आर्टिकसम्बन्धी रोग धेरैमा भेटिएको छ । गाउँ–सहरलाई छुट्ट्याएर हेर्दा सहरमा पनि तल्लो वर्गको जनसंख्या बढ्न थालेका छन् ।
तल्लो वर्गका मान्छे सहरमा बस्दा धेरै जना एउटै कोठामा बस्नुपर्छ । त्यसले सहरमा भीड बढ्यो । त्यसरी बस्दा रुघा–खोकीजस्ता समस्याले धेरै सताउँछ । घाँटीको इन्फेक्सन बढेपछि रिम्याटिक फिबर भन्ने पुरानो रोग बढेर मुटुको रोग पनि लाग्न सक्छ । विगतको तुलनामा सहरमा मुटुको रोगमा परिवर्तन आएको छ । त्यसको मुख्य कारण भीडभाड हो ।
सहरको तुलनामा गाउँ धेरै सुरक्षित देखिन्छ । गाउँमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ । सहरमा जस्तो गाडीको सुविधा हुँदैन । हिँडेपछि शरीर सक्रिय हुने तथा व्यायाम हुने हुन्छ । त्यसका साथै सहरमा जस्तो जहाँ भन्यो त्यहीँ खान पाउने सुविधा पनि गाउँमा हुँदैन ।
सहरका मानिसमा चिल्लोयुक्त खानपान आवश्यकताभन्दा धेरै भयो । गाउँघरतिर रिम्याटिक डिजिज धेरै देखिएको छ । सहरी क्षेत्रमा व्यस्त जीवनशैलीका कारण मुटुरोगको समस्या देखिन्छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा जनचेतनाको अभावका कारण मुटुरोग देखिने गरेको पाइन्छ ।
बाथ मुटुरोग तथा जन्मजात मुटुरोगहरू बढी देखिएको छ भन्नुभयो, यसको खास कारण के हो ?
बाथ ज्वरोले हुने मुटुरोगलाई -योमाटिक हार्ट डिजिज भनिन्छ । त्यसले कालान्तरमा गएर मुटुका भल्वलाई ड्यामेज गर्छ । यस्तो ज्वरो आइरहे कालान्तरमा गएर मुटुका भल्वहरू बिग्रने हुन्छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण स्ट्रेप्टोकोकस नामक ब्याक्टेरियाले गराउने संक्रमण नै हो, जसका कारण सुरुमा टन्सिल हुन्छ, टन्सिल बिग्रँदै गएपछि भल्व र मृगौलालाई असर गर्छ ।
जन्मजात मुटुरोग लिएर आएका पनि हुन्छन् । त्यसको कारण वंशाणुगत हो । कुपोषण, गर्भवती महिलालाई आवश्यक पोषण तŒवको अभाव तथा धूम्रपान र मद्यपान गर्ने आमाबाट जन्मेका बच्चामा पनि मुटरोग देखिन सक्छ । त्यसबाहेक ३५ वर्ष काटेका महिलाले बच्चा जन्माउँदा पनि मुटुरोग लाग्ने सम्भावना उच्च हुन्छ ।
त्योबाहेक शारीरिक व्यायामको कमी, आहारविहारको कमीजस्ता कारणले मुटुको नली ब्लक हुने सम्भावना रहन्छ । जीवनशैलीमा आएको व्यापक परिवर्तनका कारण देखिएको मोटोपनाको समस्यालगायतका समस्याले मुटुरोगको जोखिम बढाइरहेको छ ।
पहिले–पहिले ४० वर्ष पार गरिसकेपछि देखिने हृदयाघातको समस्या अहिले युवा पुस्तामा पनि उत्तिकै देखिन थालेको पाइन्छ, के कारणले त्यस्तो भएको हो ?
हो, वास्तवमै । पछिल्लो समयमा युवा पुस्तामा पनि हर्ट अट्याकको समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण भनेकै जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन हो । पछिल्लो समयमा युवापुस्तामा अल्कोहल र चुरोटको सेवन गर्ने ट्रेन्ड एकदमै बढ्दै गएको छ ।
सानै उमेरदेखि हरेक कुरामा उच्च प्रतिस्पर्धा छ । सुत्ने–उठ्ने कुराको ठेगान छैन । सानो उमेरमै बढी तनाव दिने, समयमै त्यसको व्यवस्थापन नगर्ने जस्ता कारणले मान्छेको मुटुको कोरोनरी आर्टिकमा रगत जम्ने समस्या देखिन्छ । कोरोनरी आर्टिक स्पज हुने र हर्ट अट्याकको समस्या देखिन्छ ।
चुरोट, रक्सी, लागूऔषध तथा उच्च बोसोयुक्त खानपानले गर्दा युवा अवस्थामा पनि हर्ट अट्याकको समस्या देखिने क्रम बढेको हो । प्रोट्रिनभन्दा पनि कार्बोहाइड्रेड बढी भएका खानेकुरा खाने चलन बढी छ ।
चुरोट बढी खाने, व्यायाम नगर्ने र स्टे«सफुल जीवन भएको खण्डमा कोरोनरी आर्टिक डिजिजको समस्या धेरै देखिन्छ, जसका कारण पछिल्लो समयमा युवा पुस्तामा हर्टको समस्या बढी देखिएको हो ।
मुटुरोगको उच्च जोखिममा कस्ता मानिस धेरै पर्छन् ? आफू मुटुरोगको जोखिममा छु या छैन भनेर कसरी छुट्ट्याउने ?
आफूलाई मुटुरोगको जोखिम छ÷छैन भनेर मज्जाले छुट्ट्याउन सकिन्छ । पहिलो कुरा, यदि परिवारमा कसैलाई मुटुरोग छ भने त्यस्ता अभिभावकबाट जन्मेका सन्तानमा मुटुरोगको जोखिम उच्च रहन्छ ।
त्यस्तै रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढी छ भने त्यो मान्छे पनि मुटुरोगको उच्च जोखिममा पर्छ । सुगर भएका मानिस, धूमपान गर्ने मानिस, मोटोपना भएका मानिस, विशेष गरी पेट र कम्मरवरिपरि बोसो जमेका मानिस, शारीरिक व्यायाम कमी भएका मानिस तथा बिहानदेखि बेलुकैसम्म तनावग्रस्त जीवन बिताउने मानिसलाई हृदयाघात हुने सम्भावना उच्च रहन्छ ।
मुटुरोग र हामोर्नसँग सम्बन्ध हुन्छ कि हुँदैन ?
हार्मोन भन्नेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले थाइराइड हार्मोनको विशेष रोल हुन्छ । यसमा हामीले जति पनि बाइपास शल्यक्रिया गर्छौं, मुटुको नली ब्लक भइसकेपछि गरिने शल्यक्रियामा धेरैमा ‘टीएसएच’ नामक हार्मोनको मात्रा भएको पाइन्छ ।
त्यसको सम्बन्ध छ भन्ने पब्लिकेसन्स पनि छन् । त्यसैले कुनै पनि मान्छेले हृदयाघात भइसकेपछि थाइराइड फङ्सन टेस्ट गराउनैपर्छ, जसलाई टिप्mटी टेस्ट भन्छ । विशेष गरी मुटुको शल्यक्रिया गर्नुअघि सबैको थाइराइड फङ्सनको टेस्ट अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने प्रोटोकल नै बनाएका छौं ।
पछिल्लो समयमा युवा पुस्तामा पनि हर्ट अट्याकको समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण भनेकै जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन हो ।
त्यसबाहेक डाइबिटिजको त हार्मोनसँग सम्बन्ध भइ नै हाल्यो । शरीरमा इन्सुलिनको कमी भएर प्यान्क्रियाजले निकाल्ने हो, त्यसको कमी भएर सुगर लेभल बढ्ने हो, जसले गर्दा सुगर हुने मानिसमा हृदयाघातको सम्भावना बढी हुने देखिएकै छ । यसले होर्मोनसँग मुटुरोगको सम्बन्ध छ भन्ने देखाउँछ ।
पहिले र अहिले मुटुरोगको उपचार पद्धतिमा कति परिवर्तन आएको छ ?
संसार परिवर्तनशील छ । मुटुरोगको सर्जरी उपचारमा पनि निकै परिवर्तन आएको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । भोलि अझ नयाँ प्रविधिहरू भित्रिएलान् । धेरै कुरामा परिवर्तन आएको छ ।
हामीले पढ्ने समयकै बेला सन् २००६ को कुरा गर्ने हो भने सानो घाउबाट मुटुको शल्यक्रिया गर्ने प्रविधि आयो । त्यो छातीको बीचबाट चिरेर छाती खोलेर गरिने शल्यक्रिया हो । त्यसरी गर्ने शल्यक्रियामा फलामको तार लगेर जोड्नुपर्छ, जसले गर्दा प्रायः दुखिरहने, चस्किरहने हुन्छ । विशेष गरी झरीको मौसममा, चिसो मौसममा सीधै छातीमा चिसो पुग्ने भएकाले धेरै मानिसलाई समस्या देखिन्छ ।
अहिले त्यसलाई बिस्तारै विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट आइसकेको छ । त्यसलाई विस्थापित गर्न साइडबाट, अगाडिबाट काट्ने प्रविधि भित्रिसकेको छ । यसमा रोगको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक प्रविधिहरू भित्रिरहेका छन् । नेपालमा पनि यस्ता नयाँ प्रविधि भित्रिरहेका छन् ।
त्यसबाहेक मुटुको भल्व फेर्न ट्रान्स क्याथेटर प्रोसिडर आइसकेको छ । तर, त्यो हाम्रोमा भने आएको छैन । त्योबाहेक मैले नेपालमा मिलिमल इन्जाइड कार्डियाक सर्जरी भनेर पहिलो पटक सुरु गरेको छु । सानो चोट पटकबाट गरिने मुटुको शल्यक्रिया हो ।
पहिला ट्रेडिसनल सर्जरीमा छातीको बीचबाट चिरेर गरिन्छ । अहिले त्यसलाई साइडबाट चिरेर काखीमुनिबाट सानो प्वाल बनाएर मुटुको ओपन हार्ट गर्न सकिन्छ । मुटुमा प्वाल भएको बिरामी र एउटा भल्व फेर्दा त्यस्तो प्रविधि अपनाइन्छ । काखीमुनि प्वाल पारेर गर्ने विधि त मैले भारतमा पनि रिपोर्ट गरेको पाइनँ ।
कतिपय विषय भारतमा भन्दा पनि नेपालमा एड्भान्स भइसकेको छ । मैले नै यो प्रविधिमा दुईवटा शल्यक्रिया गरिसकें । नेपालमा काखीमुनिबाट प्वाल पारेर गरिने शल्यक्रिया मैले नै पहिलो पटक सुरु गरिसकें । हामी सम्मेलनमा जाँदा इन्डियामा रिपोर्ट गरेको देखिएन । यो एकदमै नयाँ विषय हो, जसलाई नेपालमा भिœयाउन सफल भइयो । यसलाई ठूलो सफलताका रूपमा लिन सकिन्छ ।
यो शल्यक्रिया सुरु भएदेखि १८ जनाको गरिसकेको छु । त्यसमा विशेष गरी मुटुमा प्वाल भएको (एएसडी÷भीएसडी), त्यसबाहेक एक मात्र भल्व फेर्नुपर्ने अवस्थामा पनि काखीमुनी प्वाल पारेर शल्यक्रिया गर्न सकिन्छ ।
त्यसबाहेक मुटुको मूल नलि फुटेको अवस्थामा पनि यो प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । काखीमुनि सानो प्वाल पारेर गरिने भएकाले सीधै अगाडि छातीबाट चिसो पस्ने डर भएर ठूलो चोट नदेखिने भएकाले यो सेवा सुरुवात भएपछि धेरैको राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ ।
ओपन हार्ट सर्जरीमा हामीकहाँ नभएको भनेको हार्ट ट्रान्सप्लान्ट मेसिन हो । त्यसलाई मुटुको प्रत्यारोपण भनिन्छ । मुटु प्रत्यारोपणका लागि पनि कानुनी जटिलता फुकिसकेको छ । नेपालमा केही वर्षभित्र मुटुको प्रत्यारोपण पनि सफल हुने देखिन्छ । एसिस्टिन डिभाइस पनि छैन ।
त्यो भनेको आर्टिफिसियल हार्ट हो । आर्टिफिसियल हार्ट पनि अहिले नेपालमा सम्भव भएको छैन । किनकि त्यो धेरै खर्चिलो पनि छ । टेक्निकल्लीचाहिँ गर्न सकिन्छ, तर मुख्य विषय भनेको महँगो भएर हो । मुटुको प्रत्यारोपण र आर्टिफिसियल हार्टबाहेक अन्य सबै उपचार नेपालमै हुन्छन् ।
त्यसो भए मुटुरोगको उपचारका लागि बिदेसिनुपर्ने अवस्था छैन ?
वास्तवमै छैन । नेपालमा मुटुरोगको सबै उपचार गर्न समस्या छैन । मुटु प्रत्यारोपण र अन्य केही रोगको उपचार गर्न आवश्यक सामग्री नभएका कारण बाहिर जानुपर्नेबाहेक सम्पूर्ण उपचार नेपालमा उपलब्ध छ । सुविधायुक्त अस्पताल र मुटु प्रत्यारोपणका लागि बाहिर जानेबाहेक उपचारका लागि बिदेसिनुपर्ने अवस्था छैन ।
परिवारमा मुटुरोगी भएको खण्डमा हेरचाह राम्रो गर्ने तथा मुटुरोगसँग सम्बन्धित आवश्यक जानकारी लिएर होसियारी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । मान्छेले गर्ने हरेक काम अन्यका लागि हुने भएकाले आफ्ना लागि वा आफ्नो शरीरका लागि दैनिक एक घण्टा शारीरिक व्यायाम गर्ने गरेको खण्डमा मुटुरोगबाट बच्न सकिन्छ ।
बढ्दै गएको मुुटुरोगको अवस्थालाई कसरी रोक्ने ?
आजभन्दा १ सय वर्षअगाडि नेपालमा मुटुरोगको अवस्था के थियो भन्ने हामीलाई थाहा छैन । इतिहास कसैलाई थाहा छैन । म पढेको युनिभर्सिटीमा इटालीमा २ सय वर्ष पुरानो मुटु राखिएको छ । ८ सय वर्षदेखि मेडिसिन पढाइ हुन्छ ।
हामीकहाँ सबैभन्दा पुरानो भनेको जम्मा ३० वर्ष भयो । दुई वर्षअगाडि मुटुमा पनि हर्ट अट्याक भएर मरेको थियो । त्यसको नशामा देखिन्छ, हामीले त्यो अध्ययन ग¥यौं । यसले २ सय वर्षअगाडि पनि यिनै रोग थियो है भन्ने बुझिन्छ ।
हामीकहाँ बढेको छ है भन्ने वैज्ञानिक आधार भने केही छैन । त्योसँगै मुटुको उपचारमा डाइग्नोस्टिक पनि बढेको छ । पहिले–पहिले गाउँघरमा भूत लागेर, वाण लागेर म¥यो भनिन्थ्यो ।
अहिले उपचार पनि बढेको छ । रोग नै लाग्न नदिनु हो । अहिले हाम्रो प्रविधिको विकास भयो, रहनसहन, आहारविहारले पनि मुटुरोगलाई बढाइरहेको छ । जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ । लाइफस्टाइल, बाबुबराजेको स्टाइल दिनदिनै काम गर्ने थियो ।
धेरै काम गर्थे । परिश्रम गर्थे । अहिले त्यसको ठीक उल्टो ¥यापिट बढेको छ । २० वर्षअगाडि ९० प्रतिशत मानिस गाउँमा बसेर खेतीपाती गर्थे भने २० वर्षको अन्तरमा ६० प्रतिशत मानिस गाउँबाट सहर पसेर बसी–बसी खान थाले । गाउँमा खेतबारी बाँझै छ । बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन भएर पनि केही रोग बढिरहेका छन् ।
अहिले फास्टफुड खान्छौं । पहिले एक माना घिउ खाएर मजाले काम गर्थे । क्यालोरी सबै लस हुन्थ्यो । अहिले पनि खाना त्यस्तै खान्छौं । घरमा श्रीमतीले, आमाले एक थाल भात खानु भन्छन् । भात भनेको कार्बोहाइड्रेड हो । शरीरमा गएर फ्याट भएर भुँडी लागेर बस्छ ।
त्यसले कालान्तरमा गएर रगतको नली बाक्लो गराई हर्ट अट्याक गराउने हो । त्यहाँसम्म हाम्रो दिमागले सोचेको छैन । खानपानमा आएको परिवर्तनसँगै शारीरिक अभ्यास भने छँदै छैन । हामी सुखी जीवन जिउन थाल्यौं ।
कि सार्वजनिक यातायात चढ्ने, कि मोटरसाइकल कि कार चढ्ने गर्छाैं । शरीरलाई चाहिने भन्दा बढी कार्बोहाइड्रेड जम्मा भएपछि मुटुरोगले छुन थाल्छ । त्यसको निकास रगतमा पनि प्याट बढी हुन्छ र रक्तनलीमा जम्मा भएर कालान्तरमा मुटुरोगले समाउँछ ।
नसर्ने रोगको न्यूनीकरणका लागि राज्यबाट कस्तो ठाउँमा लगानी गर्नु आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
सरकारले नसर्ने रोगका लागि वर्षौंदेखि लगानी गर्दै आएको छ । तर, त्यो लगानी उपचारात्मकतिर बढी देखिएको छ । पछिल्लो समयमा जीवनशैली नै नसर्ने रोगको प्रमुख कारण देखिएकाले राज्यको लगानी पनि परम्परागत शैलीमा भन्दा अहिलेको ट्रेन्डअनुसार परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
गाउँघरमा सामान्यभन्दा सामान्य जनचेतनाको अभावमा मुटुरोगीले अकालमा ज्यान गुमाउने गरेका छन् । यसले गाउँघरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमको अझै अभाव छ ।
त्यसैले राज्यले ठाउँ हेरेर तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । तत्काल समस्या भइसकेका मान्छेलाई उपचार त गर्नुप¥यो । त्यसपछि जनचेतनाका कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।
मुटु मुटुरोगको सर्जरी